Imibono ye-3D Summer Photography ehamba phambili - iLucidPix
Akungabazeki ukuthi ihlobo yisizini efanelekayo yezithombe. Ngesimo sezulu esihle kanye namahora amade okukhanya kwelanga, kunamathuba amaningi kakhulu wokuhlola nokuhlola imibono yezithombe. Uma ufuna ukwazi inqubo entsha yezithombe kuleli hlobo, sincoma ukufunda ukwenza kahle izithombe ze-3D nge I-LucidPix! Ukukusiza ukuthi uqalise, nansi iqoqo lemibono yokuthatha izithombe ehlobo ye-3D ethepha kabili ongafuna ukuyengeza kuhlu lwakho lokuthwebula kule sizini.
Namanje Impilo Photography
Ukuthatha izithombe zempilo namanje kuyindlela enhle yokuzijwayeza amakhono akho wokuthwebula izithombe, njengoba kunamathuba amaningi wezithombe ezungeze wena. Noma unezinto ozilele ekhaya, ungakwazi kalula ukusetha ilungiselelo lezimbali, izithelo, iziphuzo, nokunye okokuhlobisa kwehlobo. Ubuhle behlobo ukuthi ungathatha noma wakho izithombe zempilo ngaphakathi ekhaya lakho, noma nangaphandle egcekeni lakho! Ngaphezu kwalokho, ukuthatha yakho izithombe zempilo namanje ku-3D kuzoletha umbono oyingqayizivele kanye nokunyakaza ezithombeni zakho ezizokuvumela ukuthi ulethe inkathi yokuphila.
Izithombe Zasehlobo Zasehlobo
Uma kukhona into eyodwa ihlobo eyaziwa ngayo, konke ukuphatha okumnandi ongakudla phakathi nenkathi! Kusuka kwizithelo ezinjengemango kanye nama-sitrobheli, kuya kokwenza okusaqandisiwe okufana nama-popsicles noma isiphuzo se-slushie, okunikezwa kwehlobo ukuphathwa kwemibala ehlukahlukene. Akukhona nje kuphela ukuthi lezi ziphathi ziyanelisa izifiso zakho, kepha zingasebenza njengezihloko ezinhle zezithombe zakho ze-3D!
Ngakho-ke qoqa izinto zakho ozithandayo zasehlobo bese uphumela epikinikini enenhlalo epaki yangakini noma ngemuva kwendawo. Hlela ukudla kwakho neziphuzo zakho ngokumelene nendawo engemuva yengubo yepikiniki noma utshani obuluhlaza bese uthwebula izithombe zakho ze-3D. Funda eyethu iposi blog noma ubuke eyethu Ividiyo ye-YouTube ukufunda ukuthi ungazakha kanjani izithombe zokudla ezimangazayo ku-3D.
Ukuthatha Izithombe Zasehlobo Kwangaphandle
Ngamahora anwetshiwe okukhanya kwemini phakathi nehlobo kuza amathuba amaningi okuchitha isikhathi ngaphandle nokubamba izithombe. Ihlobo yisikhathi esifanele sokusebenzisa okuhle kwesimo sezulu esihle futhi uhambe ngezinyawo noma ukukanisa e ipaki yezwe eseduze. Sincoma nakanjani ukuyela ngaphandle ekuseni kakhulu noma kusihlwa ukuze sithwebule imibala ekhanyayo yokuphuma nokushona kwelanga.
Ngaphezu kokuthola izibani ezifudumele ezithambile ngesikhathi segolide, futhi ungahlala isikhathi eside ukuthwebula izithombe zakho ngenkathi ihora eliluhlaza okwesibhakabhaka, okuyisikhathi sokushona kwelanga lapho ilanga lingaphansi komkhathi futhi isibhakabhaka siba semthunzini ohlaza okwesibhakabhaka. Ukuthola uhlu lwamathiphu wokufunda kahle izintaba nge-LucidPix, bheka ezethu isihloko lapha.
Olunye uhlobo lokuthwebula isithombe esilungele ihlobo, ukuthwebula izithombe zamanzi kuyindlela enhle yokufunda izindlela ezintsha zokuthwebula izithombe. Yibhekisa echibini lakho elingasemuva, ogwini, noma echibini eliseduze bese ubamba izindawo zobumanzi zamanzi njengoba ukukhanya kwelanga kudlula amaza amanzi. Ungaphuma futhi endaweni yakho yokududuza futhi uthwebule izithombe zakho ngaphansi kwamanzi! Vele uqiniseke ukuthenga ikhamera engangenisi manzi or icala lefoni okokuqala!
Umqondo owodwa ococekile wasehlobo wokuthwebula amanzi ashukumisayo ukuthatha izithombe ezivezwa isikhathi eside. Izithombe ezivezwa isikhathi eside zizokusiza ukudala umphumela othambile, ogelezayo wamanzi ezithombeni zakho, futhi ukuguqula lezi zithombe zibe yi-3D kuzokwenza kubonakale sengathi amanzi ezithombeni zakho ahamba esikrinini! Bheka amanye amathiphu wokuthwebula izithombe ezivezwa isikhathi eside lapha.
I-5 Parallax Effect iPhone Izinhlelo Zokukhulisa izithombe zakho →← Amathiphu Wokuthatha izithombe Zasendle Somaphakathi